तपाईं केवल क्रेम गर्न को लागी मिनेट भने अध्ययन गर्ने
तपाईं केवल मिनेट छ भने अध्ययन कसरी गर्ने
तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ, ठीक छ? तपाईंले परीक्षणको बारेमा बिर्सनुभयो (वा विलम्बित) र एहसास भयो कि तपाईले धेरै ज्ञानको बारेमा कम्तिमा एक घन्टा भन्दा कम थियो। त्यस अवस्थामा, केही व्यक्ति धोखा पानामा निर्भर रहन्छ, जुन राम्रो विचार कहिल्यै होइन । तपाईं, अर्कोतर्फ, यो गर्न को लागी छैन। एक कुञ्जी परीक्षणको लागि कुञ्जी कुञ्जी कसरी जान्नुहोस्, र तपाइँको परीक्षणको लागि अध्ययन पनि भए तापनि तपाईंसँग मात्र छोटो समय छ।
1. अर्को ठाउँमा शान्त
यदि तपाईं स्कूलमा हुनुहुन्छ भने पुस्तकालयको लागि वा शान्त कक्षाकोठामा जानुहोस्। यदि तपाइँ दाँया अघि घरमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने, टिभी बन्द गर्नुहोस्, तपाइँको कक्ष बन्द गर्नुहोस् र कम्प्युटरमा शक्ति दिनुहोस्। आफ्नो कोठामा जानुहोस्। आफ्ना मित्रहरूलाई अब तुरुन्तै छोड्नलाई भन्नुहोस्। यदि तपाईंसँग क्र्यामको लागि छोटो छोटो समय छ भने, तपाईं आफ्नो फोकसको 100% आवश्यक पर्दछ।
2. तपाईंको अध्ययन गाइड सिक्नुहोस्
धेरै शिक्षकहरूले एक प्रमुख परीक्षणको लागि अध्ययन गाइडहरू पास गर्छन्। यदि तपाईंको शिक्षक उनी मध्ये एक हो, अहिले यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग परीक्षणको लागि क्र्याम छ भने, यो प्रयोग गर्नु भएको समय मात्र हो। एननोनिक उपकरणहरू जस्तै एन्कोनक्स्स वा गीतको प्रयोग गरेर सबै चीजहरू याद गर्नुहोस् । यस समयमा फ्लैशकार्डहरू परेशान नगर्नुहोस्-तपाई केवल समय बर्बाद गरिरहनु हुनेछ।
3. पुस्तक क्रैक गर्नुहोस्
यदि तपाईंले आफ्नो अध्ययन गाइड गलत गर्नुभयो वा तपाइँको शिक्षकबाट प्राप्त गर्नुभएन भने, त्यसपछि कलम र नोटबुक लिनुहोस् र पुस्तकमा हेड गर्नुहोस्। परीक्षामा आवरण गरिएको प्रत्येक अध्यायको पहिलो दुई पृष्ठहरू पढ्नुहोस्, प्रमुख विचारहरू, शब्दावलीहरू र अवधारणाहरू खोज्दै।
कुनै पनि बोल्डलाई संक्षेप गर्नुहोस् वा तपाईंको नोटबुकमा आफ्नै शब्दमा हाइलाइट गर्नुहोस्। प्रत्येक अध्यायको अन्तिम पृष्ठ पनि, तपाईंको टाउकोमा समीक्षा समीक्षाहरूको जवाफ दिनुहोस्। यदि तपाईं समीक्षा प्रश्नको उत्तर फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि यसलाई पुस्तकमा हेर्नुहोस्। यो परीक्षणमा शायद प्रश्न हो।
यदि तपाईंसँग अझै पनि समय छ भने, यी अतिरिक्त चरणहरू लिनुहोस्।
1. तपाईंको नोटहरू, क्विजिज र असाइनमेन्टहरू समीक्षा गर्नुहोस्
तपाइँको शिक्षकले तपाइँको परीक्षालाई नोट, क्विजिज र असाइनमेन्टको आधारमा बनाएको छ कि उनले त्यो एकाइको समयमा दिए। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई राख्नुभएको छ, (र तपाइँ सधैँ तपाईंको अन्तिम परीक्षा भन्दा पहिले हुनुपर्छ), त्यसपछि तपाईंले सबै चीजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, पृष्ठहरूमा जानकारीको सम्झनामा।
2. आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्
अब तपाईंको सर्वोत्तम मित्रलाई खोज्नको लागी समय छैन र तपाईसँग उसको प्रश्नोत्तरी छ। यो क्र्याम सत्र हो! तपाईं एक अध्ययन मित्र पत्ता लगाउन समय बर्बाद गर्नुहुन्छ! यसको सट्टा, अध्ययन गाइडमा जवाफहरू राख्नुहोस् र आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। चीजहरूलाई सर्कल गर्नुहोस् जुन तपाइँ थाहा छैन र तिनीहरूलाई पुनः द्रुत फिर्तीको लागि फर्कनुहोस्।
3. मदतको लागि असल विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस्
यदि तपाइँ आफ्नो कुनै पनि अध्ययन सामग्री फेला पार्न सक्नुहुन्न भने कक्षामा स्मार्टस्ट बच्चा फेला पार्नुहोस् र उनीहरूको अध्ययन पुस्तिका उधारो लिन अनुरोध गर्नुहोस्। अझ राम्राे? उसलाई पढ्न तपाईंसँग यो प्राप्त गर्नुहोस्। राम्रो विद्यार्थीहरू उनीहरूलाई कसरी चासो देखाउन मन पराउँछन् । त्यो अहंकारले तपाईंको फायदामा प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको परीक्षणको बारेमा जान्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू बताएर तिनीहरूलाई राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनुहोस्।
परीक्षा लिने सुझावहरू
तपाईंको नोनोमिक डिभाइन्स तल लेख्नुहोस् : शिक्षकले यसलाई तपाईंलाई दिईरहेको बेलामा तपाईंको म्यानेमिक यन्त्रहरू तल लेख्नुहोस्, तपाईले तपाइँको अक्षरों र वाक्यांशहरू तपाईलाई सामग्री सम्झनका लागि बिर्सनु अघि बिर्सनु भयो।
एकपटक तपाईंले परीक्षण सुरु गर्नुहुँदा तपाई तिनीहरूलाई बिर्सनु हुन्न!
शिक्षकको लागि मद्दत सोध्नुहोस्: यदि तपाइँ परीक्षण गरिरहनुभएको बेला गुमाउनु भयो भने, आफ्नो हात उठाउनुहोस् र शिक्षकलाई सोध्नुहोस् भने केही कुरामा फिक्री भएमा। तपाईं संघर्ष गर्दा शिक्षकहरूले अक्सर सही दिशामा नेतृत्व गर्नेछन्, विशेषगरि यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ जुन साधारणतया कक्षामा प्रयास गर्दैछ। यदि cramming तपाईंको ठेठ व्यवहार हो भने, यद्यपि, तपाईले मात्र यसलाई आफ्नै मा मात्र जानुपर्छ!
6 भिजुअल शिक्षाका लागि अध्ययन युक्तिहरू
बेस्ट व्हाइट शोर अनुप्रयोगहरू
कसरी निर्धारण गरिएको मुख्य विचार पत्ता लगाउनुहोस्
चिनियाँ टोस्ट कसरी बनाउने भन्ने सिक्नुहोस्
के गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको कलेज रूममेन्ट तपाईंको सामान प्रयोग गर्दछ
प्रौढ शिक्षा कसरी पत्ता लगाउन र टेक्सासमा तपाईंको जीईई कमाउनुहोस्
"सत्यको गृहिणीको क्षण"
किन चित्रकारहरू आकर्षित गर्न सिक्नुपर्छ
10,000 भन्दा बढी सैनिकहरूले टाइविकमा मर्नु पर्ने विश्वयुद्धको समयमा
राक्षसों र भूतहरु संग कैम्पिंग मुठभेड
मसीही क्रियाकलाप वा स्मारक सेवा योजना गर्दै
कसरी र जब भेडा (ओविस आर्य) पहिलो गरिब थिए
स्टेफफेर द्वारा 14 वर्षीय पुरानो शट वा बिटुन
तपाईंले सबैलाई Telekinesis को बारेमा जान्न आवश्यक छ
6 अफ्रिका-अमेरिकन विचारकर्ताहरूले आत्मकथाहरू प्रकट गर्दै
तटस्थ जोन ट्रेप के हो?
अमेरिकी गृहयुद्ध: किट व्यानरनका बागहरू
ईस्टर को ईसाई उत्सवहरुको इतिहास
रातो रातो रातो रातो रातो तारा हो
कसरी Smart GMAT अध्ययन योजना विकास गर्ने?
एक स्नातक प्रवेश साक्षात्कार को समयमा सोध्नु के हो
5 एक रोमांटिक मूड को लागि पियानो गीत
एकसिस बिस्तार कसरी लेख्नुहुन्छ
चीनमा बौद्धता लिन्जी चान (रिन्जेन जेन)
कोज प्रमेन्ड परिचय
छोराछोरीका कथाहरू आफैँको बारेमा
डिज्नीको एनिमेटेड क्लासिक बालबालिकाको चलचित्र 1930 र 1940 को
पूर्व अंश विद्यार्थीको साथ साक्षात्कार
एसपीक्यूआर ल्याटिनमा के हो?